Maxaa iska khuseeya muranka xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya iyo muranka xuduudaha Somaliland iyo Somaliya ? |
Maxaa iska khuseeya muranka xuduudaha Soomaaliya iyo Kenya iyo muranka xuduudaha Somaliland iyo Somaliya ?
Waxa bishan Feb 21keedii 2019 ay wasiirka arrimaha dibadda Kenya, haweenayda
Monica Juma ay soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadashay xaraashkii ay isla
bishan Feb 7deedii 2019 ku xaraasheen maamulka Federaalka Soomaaliya shir ka
dhacay magaalada London ee Carriga Ingiriiska goobo lagu tuhmayo inay cegaagto saliid iyo gaas oo ay ku jirto xad badeed ay Kenya leedahay.
Haddaba waa maxay taariikhda xad badeedkan lagu muransan yahay?
Sida ay Monica Juma ku doodayso dhulkani waxa xadkiisa la jeexay oo la iskula meel dhigay heshiis 1924 dhex maray gumaystayaashii Ingiriiska iyo Talyaaniga. Heshiishkaasi wuxuu qeexayay xadka u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya.
Xadkaasi wuxuu ka soo bilaabmaa saddex geesoodka ay ku kulmaan Etoobia, Kenya iyo Soomaaliya, wuxuu sii maraa webiga Dawa ee degmada Madheera ilaa uu ka gaadhayo badweynta Indiya isagoo sii dhex maraya degmada Lamu.
Si kale haddii loo dhigo wuxuu xadku kala qaybiyaa dhulka ay deegaan ahaan dadka
Soomaalida iyo muslimiinta kale ku badan yihiin ee woqooyiga Kenya oo dhan ah iyo
Soomaaliya oo dhan ah. Monica Juma waxa hadalkeeda ku jiray in 1964 ay Soomaaliya diiday inay aqoontaso xadkii ay dawladihii Afrikaanka ahaa ee xoroobayay ka dhaxleen gumaystayaashii Yurub.
Diiditaankaasi wuxuu salka ku hayay fekradii ay Soomaaliya ku doonaysay inay shantii gobol ee Soomaalida isku keento.
Waxay Soomaaliya sanadihii1963 ilaa 1967 Kenya ka dhex hurisay dagaalkii loogu magac daray dagaalkii Shiftada.
Waxay ahayd 1981 markii kaligii taliyihii Soomaaaliya ee Siyaad Bare uu ugu dambayntii ku xaqiijiyay bayaan uu ka soo saaray shir madaxeedkii ururkii Midawga Afrika inay Soomaaliya ka tanaasushay sheegashadii dhulka ay Kenya leedahay
Waxay intaa hadalkeedii ku dartay inay Soomaaliya mar labaad soo laba kaclaysay markii ay 2014 dacwad dhul sheegasho ah u gudbisay Maxkamada Caalamiya ee Magaalada Heyg.
Damaca cusub ee Soomaaliya Waxaa is weydiin leh waxa Soomaaliya damac uga galay xad badeedka ee ay xadka intiisa dhulka ah uga maagtay. Jawaabta meel dheer ha ka raadin. Soomaaliya waxay halgan ugu jirtaa in khayraadka dhulka dadka Soomaalida oo dhami degaan ay Muqdhisho isugu keento.
Sida ay Soomaaliya aanay u aqoonsanayn xadka ay la wadaagto Kenya, ayaanay u
aqoonsanayn xadka ay wadaagto Somaliland.
Waxase hubaal ah inay Soomaaliya sheegashadani faraka kaga guban doonto. Durtaba awladda Kenya tallaabooyin cabsi geliya madaxda Soomaaliya ayay qaaday. Taasina waxay keentay aamustaanta siyaasiyiinta Soomaaliya.
Madaxweynaha maamulka Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisal
Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre iyo wasiirkooda Arrimaha Dibeda midkoodna ilaa hada kama uu hadal murankaa soo kala dhex galay Kenya.
Waxaa la hubaa in siyaasiyiinta Soomaaliya intooda badan ay hantidoodu taalo wadanka Kenya. Taasina waa ta keentay in ilaa hada madaxda Soomaaliya jawaab wadan jacayl ka muuqato aanay ka bixinin talaabooyinka ay dawladda Kenya qaadatay ee dhabar jabka ku ah.
Wadaniyadii ay laabta ku garaacanayeen meeday? Waxaad xasuusataa inay
siyaasiyiintaasi maanta aamusani ka qayliyeen markii Imaaraadku ku balan qaadeen inay dhisayaan dekeda Berbera ee Somaliland. Dawladda Imaaraadka waa tii laga eryay Soomaaliya, waatii diyaaradoodii madaarka Muqdisho hadh cad lagu boobay ee looga lacag ay weliba ciidanka booliska maamulka Soomaaliay u wadeen, waa tii UN-ta ka ashtakaysay Somaliland. Maantana afkaa juuq gabay.
Monica Juma waxay war saxaadeedkeeda ku soo gebo-gebaysay: Taako dhulka Kenya ah u ogolaan mayno cid kale.
Hadaba waxa ka khuseeya Somaliland muranka xadka Kenya iyo maamulka Somaliya waxaa si fiican u qeexaaya qaraarkii ay 1964 Ururuka Midowga Afrika ku go’aamiyeen in xuduudihii Afrika
ee gumaysigu ka tagay aan wax ka badal lagu samaynin.( In 1964, the OAU General Assembly passed Resolution 16(1) for African States to preserve the colonial boundaries).. Qaraarkani ayay ahayd inay Soomaaliya ixtiraamto.
Laakiin nasiib daro Soomaaliya iyadoo iska indha tiraysa wixii ay dawladaha Afrikaanku ku heshiiyeen ayay dhulka xuduudaha Somaliland usheeganeysaa sida ay u sheeganayso dhulka xuduuda Kenya.
Waxay Kenya ka ogolaan weyday maamulka Somaliya, Somalilandna maka ogolaan
Xubno Kamida Ururka Qareenada Somaliland oo Farro galin Sharci Ku…
Ururka Mutadawaciinta ah ee Himilo Action Group Oo Komeero Ay…
UNHCR Oo Lagu Eedeeyey Xadgudubka Ay Ku Hayso Soomalida Liibiya
Gantaalka cusub ee Kuuriyada Waqooyi ma wuxuu farriin u dirayaa…
Xubnaha Jamhuuriga Ee Ka Codeeyey Trump Oo Loo Hanjabay